Umbono weGeospatial kunye neSuperMap -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Umbono weGeospatial kunye neSuperMap
Geospatial - GISezintshaSuperGIS
UGeofumadas uqhakamshele uWang Haitao, usekela-Mongameli wase I-SuperMap International, ukubona kuqala isandla zonke izisombululo ezintsha kwicandelo le-geospatial, elinikezwe yi-SuperMap Software Co, Ltd.
1.Sicela usixelele ngohambo lweSuperMap lokuzivelela njengomboneleli ophambili wase China kumthengisi we-GIS
Isoftware yeSuperMap Co, Ltd yinkqubo yeqonga le-GIS kunye nomboneleli weenkonzo. Yasekwa ngonyaka ka-1997 eBeijing (kwikomkhulu). Okona kubalulekileyo kukuba iSuperMap yaba yinkampani yokuqala yesoftware ye-GIS e-China ngo-2009. I-SuperMap igxile ekuphuhliseni isoftware ye-GIS, isoftware yesicelo kunye neenkonzo zelifu elikwi-intanethi ukusukela oko yaqalwa ngo-1997. Ngoku, iSuperMap idibanise izandla kunye namaqabane angaphezu kwe-1,000 30 eluhlaza ukuxhobisa ngolwazi ngoorhulumente, amaziko kunye namashishini kumashishini awahlukeneyo. Okwangoku, iSuperMap inikezelwe ekuphuhliseni imarike yangaphandle. Ukuza kuthi ga ngoku, iSuperMap ingene ngempumelelo kwi-Asia, Yurophu, e-Afrika nase Mzantsi Melika nakwamanye amazwe nakwimimandla kwaye yaqulunqa abasabalalisi kunye namaqabane avela kumazwe angaphezu kwama-100 nabasebenzisi bokugqibela abavela kumazwe angaphezu kwe-XNUMX.
2.Luphi olunikezo lwakho lwamva nje?
Imveliso yamva nje yeSuperMap yiSuperMap GIS 10i, equka i-GIS Server, Edge GIS Server, Terminal GIS, Online GIS Platform. Ngaphaya koko, iSuperMap GIS 10i idibanisa itekhnoloji ye-AI GIS kwaye iphinda ivelise iBig Data GIS, i-3D entsha ye-GIS, i-Cloud Native GIS kunye ne-Cross Platform GIS ukuseka inkqubo yeetekhnoloji ezingundoqo ezintlanu ze-"BitCC" ze-software yeqonga le-GIS.
3. Yeyiphi indima iGIS enokuyidlala kulawulo olusebenzayo lwezixeko ezi smart? Yeyiphi kwiimveliso zakho eyenzelwe ngokukodwa izixeko ezihle? Imveliso yakho yahluke njani kwezinye isoftware yeGIS?
Ngenxa yeempawu zendawo, i-GIS idlala indima ebalulekileyo kwizixeko ezihlakaniphile. Okokuqala, ulwazi olunxulumene ne-GIS lulwazi olusisiseko lolawulo lweedolophu eziphucukileyo; Okwesibini, i-GIS ibonelela ngumboneleli ophumelelayo weentlobo ezahlukeneyo zezicelo ezidityanisiweyo zedolophu, ezinokunceda ukudityaniswa okusebenzayo kwezixhobo zolwazi kunye nokufezekisa uphuhliso olungcono kunye nokusetyenziswa kwezixhobo; Okwesithathu, ukusetyenziswa kwetekhnoloji ye-GIS kungabonelela ngenkxaso yokubonwa kwendawo, isigqibo sendalo, ubume bendawo, kunye nolawulo lwendawo yezicelo ezihle zedolophu.
Kwintsimi yezixeko ezihlakaniphile, iSuperMap ibonelela ngezisombululo “zeqonga elinye, inethiwekhi enye, intsimi enye” ezisekwe kwizixeko, izithili, imimandla, izitalato, iipaki, kunye nezakhiwo. "Iqonga elinye", oko kukuthi, i-spatio-temporal yedatha enkulu yedolophu ehlakaniphile, ibonelela ngeqonga elidibeneyo lokudibanisa, ukulawula kunye nokwabelana ngemithombo yolwazi lwengingqi. "Uthungelwano" lubhekiselele kwizicelo zolawulo lwesixeko sothungelwano, ulawulo lwentlalontle, ulawulo lwesitrato kunye nolwasemaphandleni kunye nabanye. Kulawulo lweedolophu, ibonelela ngolawulo lwedijithali kulawulo lweedolophu, uhlolo oluguquguqukayo lwemeko yesixeko, kunye nohlalutyo kunye nomgwebo wemeko yedolophu ukuphucula ngokugqibeleleyo inqanaba lolawulo lwedolophu. “Enye efayiliweyo”, oko kukuthi, ibhekisa kwiipaki ezikrelekrele, amasimi ahlakaniphileyo kunye nezinye izicelo, ikakhulu ngohlobo lweepaki kunye neziza. Idibanisa i-BIM ne-GIS ukubonelela ngenkonzo esulungekileyo kunye nezicelo zolawulo lwepaki kunye nocwangciso lwezifundo, ulwakhiwo, kunye nolawulo, kunye nokuphucula amandla eenkonzo zolawulo kunye nokhuphiswano lwasendle.
Xa kuthelekiswa nabanye abathengisi be-software ye-GIS, iSuperMap ineengenelo ezinkulu kwidatha enkulu yendawo kunye netekhnoloji entsha ye-GIS ye-3D. Ukongeza, iSuperMap inokunika abasebenzisi izisombululo ezibanzi kwisixeko esi smart + ucwangciso lwedolophu, ulwakhiwo, ulawulo kunye nabanye.
4. Ukudityaniswa kwe-BIM kunye ne-GIS kulinceda njani icandelo lokwakha? Ngaba uSupermap ukwazile ukwenza uphawu kulwakhiwo lwedijithali? Yabelana nge-BIM + GIS yecala lakho lokudibanisa.
Ukudityaniswa kwe-BIM kunye ne-GIS kuvumela abasebenzisi bokwakha ukuba baveze ezona ndawo zikhulu zephawu ngaphakathi kweprojekthi yokuvavanya ngokuchanekileyo ifuthe lokusingqongileyo, ukukhawulezisa ukuhanjiswa kweprojekthi, kunye nokuphucula ukusebenza kunye nokulungiswa kweeasethi ezigqityiweyo.
Elinye lala matyala yiPlatifomu yoCwangciso loKwakha eyi-Beijing Subcentre Smart. Kule meko, ukudityaniswa okungenamthungo kwe-BIM kunye ne-GIS kubonelela ngokwakhiwa kunye namaqela olwakhiwo ngolwazi lwe-geospatial ukuba aqonde ngcono iimeko ezihlaziyiweyo kunye nokubanceda ukuzisa iziphumo ngokukuko nangokuchanekileyo phantsi kweshedyuli yolwakhiwo encinci.
Ngapha koko, ngokusekwe kubuchwephesha be-GIS ye-3D engagqibekanga kunye nedatha ye-IoT, iqonga lingabonelela ngeengcali kunye nabanye ababandakanyekayo malunga nexesha lokwenyani lokwenziwa kwenkqubela phambili yokwakha ukuvavanywa okungcono kunye nolawulo kunye nokugcinwa komjikelo wobomi bonke.
5.Umkelwe njani kwiimveliso zeSuperMap ukuza kuthi ga ngoku? Ngawaphi amanyathelo owathathayo ukwandisa ulwazi kunye nokwamkelwa komntwana?
Okwangoku, "iSuperMap inesabelo sesithathu esikhulu kwimakethi ye-GIS yehlabathi, kunye nesabelo sokuqala esikhulu kwimakethi ye-GIS yaseAsia. Ngeli xesha, ingxelo ibonisa ukuba ngokukhula okukhawulezayo kwiminyaka engaphezu kwama-20, iSuperMap Software ngoyena mboneleli mkhulu waseTshayina weGIS, kunye nababoneleli abakhokelayo beGIS kwimarike yaseTshayina, "ngokutsho kweNgxelo yoPhando lweMarike yeeNkqubo zoLwazi lweJografi epapashwe yi-ARC. Iqela labacebisi.
Ukuqhubela phambili ukuphucula uphawu lweSuperMap kunye nokwandisa ukwamkelwa komntwana, iSuperMap iyaqhubeka nokugxila ekuphuhliseni nasekuboneleleni ngeemveliso eziphambili kunye nezobugcisa kwishishini. Kwaye iSuperMap igxininisile ukuba umgangatho ngowona uphambili ophambili ukusukela oko wasungulwa. Kwangelo xesha, kwicandelo lezeshishini, iSuperMap iye yadibana kunye namaqabane ukwenza ukusebenzisana kweprojekthi, ukubonelela ngezixhobo ezisebenzayo nezisetyenziswayo kwicandelo. Ngaphaya koko, iSuperMap inobudlelwane obuhle kunye neeyunivesithi ezininzi kwihlabathi liphela kwaye inegalelo ekunikezeleni isoftware kunye nenkxaso yezobugcisa kwimfundo engcono ye-GIS. Ngaphaya koko, iSuperMap iphuhlise isoftware ye-SuperMap GIS evulelekileyo kunye ne-SuperMap iClient kunye nabanye abasebenzisi abangathathi ntweni kwihlabathi liphela.
6. Uyayibona phi iSuperMap kwiminyaka embalwa ezayo?
Kungekudala, iSuperMap iza kuthatha inxaxheba kwimimandla yoyilo lwedolophu, isixeko esi-smart, i-BIM + GIS, i-AI GIS kunye nabanye, ngokokuqulunqwa kwetekhnoloji ye-SuperMap ye-Big Data GIS, 3D GIS, AI GIS, kunye neentlobo zabasebenzisi kunye neziseko zabasebenzisi kwihlabathi lonke ezifana noorhulumente, iidyunivesithi.
7. Ngawaphi amanyathelo owathathayo ukwenza i-GIS icoceke kubudala be-AI?
I-SuperMap ikhuphe i-SuperMap i-GIS 10i kwiNkomfa yeTekhnoloji ye-GIS ye-Software ka-2019. I-SuperMap GIS 10i idibanisa ngokupheleleyo iteknoloji ye-AI ukwakha iinkqubo zobuchwepheshe ezivela kwi-"BitCC", esandul 'ukongeza i-AI GIS kwinkqubo yemveliso.
Kwi-AI GIS, inamacandelo ama-3:
IGeoAI: Uhlalutyo lwedatha yendawo kunye ne-algorithm yokulungisa edibanisa i-AI kwaye iyimveliso ye-AI kunye ne-GIS.
I-AI ye-GIS: Ukusetyenziswa kwezakhono ze-AI ukongeza amanqanaba esoftware ye-GIS kunye namava omsebenzisi.
I-GIS ye-AI: Ukusetyenziswa kohlalutyo lwe-GIS kunye neteknoloji yokujonga ukubona ukwenza ulwaziso lwendawo kunye nohlalutyo lomhlaba lweziphumo ze-AI.
I-SuperMap iya kuziqhelanisa nobuchule be-GIS ngokulandela i-IA GIS trilogy yangaphambili.
8. Yeyiphi imigangatho ebaluleke kakhulu esebenzayo isoftware yakho ekusebenzisaneni kunye ne-geospatial, engineering kunye nemizi mveliso yokusebenza?
Ngo-2017, iSuperMap yavula imodeli evulekileyo ye-3D spatial model (S3M) yedatha yokuhanjiswa ngokukhawuleza, ukulayisha, ukubonisa idatha enkulu kunye ne-heterogeneous 3D geospatial yedatha kwizixhobo ezininzi kunye namaqonga. Kwaye ayenzanga ukujonga kuphela, kodwa nombuzo we-3D wendawo kunye nohlalutyo lwedatha enkulu yendawo. Ngaphaya koko, i-S3M lingumgangatho wokuqala wedatha opapashwe yi-China Association for Geospatial Information Society. Ngoku i-S3M yamkelwe ngokubanzi kwiinkampani ezingaphezulu kwe-20 kumashishini awahlukeneyo, afana no-DJI, Altizure, njl.